Caa’isha Aabaheed oo ka war bixiyey sababta toogashada looga reebay ninka seddaxaad – Hornafrik Media Network
Caa’isha Aabaheed oo ka war bixiyey sababta toogashada looga reebay ninka seddaxaad
Aabaha dhalay gabadhii yareyd ee Caa’isha, oo warbaahinta la hadlay kadib markii saakay la qisaasay laba ka mid ah seddaxdii xukmane ee kiiskaas lagu helay, ayaa ka warbixiyay sababta loo reebay ninka seddaxaad.
Aabe Ilyaas Aadan, ayaa sheegay in Ninka dib loo dhigay qisaastiisa uu yahay dambiile, balse mudda 10 cisho ah dib loo dhigay kiiskiisa, si baaritaan iyo hubin loogu sameeyo.
Sidoo kale Ilyaas wuxuu sheegay in codsi isaga ka yimid dib loogu dhigay fulinta xukunka ku dhacay Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, balse uusan jirin go’aan maxkamadeed oo dib loogu dhigay fulinta xukunka ruuxaas horay ugu dhacay isaga iyo laba nin ee saakay la toogtay.
Ilyaas Aadan ayaa intaas sii raaciyay, in saakay goobjoog uu ahaa fagaarihii lagu toogtay labada xukmane, isagoo xusay in khisaastii saakay ay qoyskiisu fuliyeen, isla markaana uu shakhsiyan hubin ku sameeyay maydadkooda labadaas nin.
Hadalkaas ayuu Ilyaas Aadan jeediyay saacad kadib markii xukunka khisaasta ah lagu fuliyay Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige.
Labada marxuum ayaa lagu toogtay fagaare ku yaalla magaalada Boosaaso, waxaase mudda 10 cisho ah kiiskiisa dib loo dhigay Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame.
Jabuuti oo sameysanaysa Dayax Gacmeed
Ciidamada ammaanka DF oo gacanta ku dhigay rag xalay dil u geystay laba nin